Shariif Xasan oo markii ugu horeeysay ka hadlay arrinta Sheekh Mukhtaar Roobow (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan oo markii ugu horeeysay ka hadlay arrinta Sheekh Mukhtaar Roobow (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa markii u horeeysey ka hadlay xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, oo dhawaan dowladda Mareykanku ka saartay liiska argagixisadda iyo kuwa madaxooda lagu doonayo lacag malaayiin doollar ah.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo wareysi siiyay idaacadda VOA-da laanteed afka Soomaaliya ayaa sheegay inuu si aad ah usoo dhaweeynayo in lasoo dhaweeyo Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur, isagoona ku tilmaamay inuu yahay nin oday ah oo goboladiisa taariikh ku leh.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka codsadey inay soo dhaweeyaan Sheekh Mukhtaar Roobow islamarkaana ay ka shaqeeyaan sidii ay uu usoo xiro gelin lahaayeen.
Dhinaca kale, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo mar la weydiiyay wararka sheegaya in ciidamadooda ay gurmanayaan Sheekh Mukhtaar Roobow, hadii Al-shabaab ay weerar ku qaadaan ayaa sheegay inuu isaga ku fillan yahay oo iska dhicin karo.
Shariif Xasan oo sidoo kale la weydiiyay inuu xiriir gaar ah la sameeyay Sheekh Mukhtaar Roobow iyo inkale ayaa ku jawaabay inuu jiro xiriir, balse uu ahaa mid dadban, haatana uu diyaar u yahay inuu si toos ah xiriir ula yeesho.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo dhawaan dowladda Mareykanka ay saartay liiska argagaxisadda ah ayaa hore khilaaf usoo kala dhexgalay isaga iyo hoggaamiyihii hore ee Al-shabaab Axmed Cabdi Godane, kaas oo muddo seddax sano kahor lagu dilay weerar ay diyaaradaha Mareykanka ku qaadeen gobolka Sh/hoose.
Ugu dambeyntii, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa tan iyo markii uu khilaafka soo kala dhexgalay hoggaamiyihii hore ee Al-shabaab ayaa ku dhuumaaleysanayay deegaano ka tirsan gobolka Bakool, waxaana inta badan la sheegaa inuu qeyb ka ahaa shacab badan oo lagu dilay gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya.